Glyphr, tifaftiraha xarfaha tooska ah ee khadka tooska ah | Abuurista khadka tooska ah
Lua louro | | Fuentes, Qalabka Naqshadeynta
Haddii aad dhex mushaaxdo Behance waxaad arkaysaa inay jiraan dad badan oo ku dhiiran kara samee fartaada ugu horeysa, kadib sanado badan oo u kuurgelid iyo bogaadin ubaahan shaqada culus ee ay qoraan dadka wax qora.
Waxaa laga yaabaa inaadan waligaa ka fiirsan, ama aad ka fikirtay dhowr jeer laakiin arintu halkaas ayey ku jirtaa. Ka waran haddii aan sameeyo nooc u gaar ah? Maanta waxaan u nimid inaan idin baro Glyphr, a tifaftiraha font-ka internetka madadaalo. Akhriso oo aad ula yaabto.
Tifatiraha qoraalka tooska ah ee khadka tooska ah
Haddii aad ku dhiiratay inaad ka baarto internetka barnaamijyada lagu sameeyay farta, waxaad u badan tahay inaad yeelan doonto magacyo sida FontLab, Robofont, Fontographer ama Glyphs. Sidaad horeyba u ogayd, dhammaantood waa barnaamijyo lacag la bixiyo (mana ku kacaan € 50, si hufan); sidaa darteed "nacas ku wareegsan" oo leh abuuritaanka font naga baxsada.
Dhinaca kale ee miisaanka waa barnaamijyo sida Glyphr: gebi ahaanba bilaash ah Faa'iidooyinkeedu waa cad yihiin: waan ogaan doonnaa haddii aan quus ka nahay ama aan xiiseyneyno abuurista noocyada dhijitaalka ah iyaga oo aan dinaar ku bixin, ka dibna, haddii aad rabto inaad sii wadato oo aad "xirfad u yeelato", iibso barnaamijka lacag-bixinta ee na taabanaya. Ama maya. Marka loo eego dhadhanka.
Aad iyo aad baan ujecelahay isku dayga dhammaan "barnaamijyada" soo muuqanaya mahadsanid HTML5. Codsiyada in uma baahna in la rakibo kombiyuutarkaaga si aad u shaqeyso, laakiin waxaad si toos ah uga shaqeyneysaa biraawsarkaaga. Si dhakhso badan, raaxo badan, dhaqdhaqaaq badan. Waxaan iska ilaalineynaa inaan kumbuyuutarkeena ku shubno barnaamijyo badan, waana jeclahay wax walba oo macnaheedu yahay inaan awoodo inaan si dhakhso ah u shaqeeyo
Istuudiyaha Glyphr wuxuu ku jiraa nambarkiisa nooca beta 3. Si aad u awoodo inaad marin u hesho, waxaa waxtar leh inaad aado bogga ugu weyn, u rogto aagga hoose iyo qaybta "Hel", dhagsii Glyphr Studio Beta 3.2. Marka xigta waxaan fursad u leenahay inaan ku rarno feyl aan ka shaqeynaynay ama, si toos ah, inaan u abuurno mashruuc cusub.
Shaashadda hadda nala tusay waa mid dareen leh. Waxaan dooraneynaa astaamaha aan dooneyno inaan qaabeyno (asal ahaan, hoose). Shaashadda dusheedana waxaan ku haynaa aaladaha wax lagu sawiro, oo aad ugu eg kuwa aan ku hayno Sawirka (leydi, ellipse, qalin ...).
Waxaan kuu sheegayaa inay aad u badan tahay adag tahay in la abuuro nooc qoraal ah. Sax, dulqaad, hal-abuurnimo, il wanaagsan ... Waxaad ku arki doontaan tifaftiraha xarfaha toosan. Waxay u badan tahay in, ka dib isku dayo yar oo aan lagu guuleysan ka dib, aad u dhaqaaqi doontid annaga xulashada font bilaash ah. Weli, weligaa ma ogaan doontid: laga yaabee inaad ogaan doontid xiisahaaga dhabta ah!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Glyphr, tifaftire font oo bilaash ah